“Ma-gafe” Cismaan Matammud oo lagu qabtay dalka Talyaaniga – Kasmo Newspaper
“Ma-gafe” Cismaan Matammud oo lagu qabtay dalka Talyaaniga
Updated - January 18, 2017 10:52 am GMT
Wararka ka imanaya dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in magaalada Milano ee woqooyiga dalkaas uu ku xiranyahay nin Soomaali ah oo lagu tuhunsanyahay in uu ahaa maamulihii Xerada Abu Whalid ee dalka Libiya.
Ninkaas oo magaciisa lagu sheegay Osman Matammud waxaa lala xiriirinayaa falal dambiyo ah oo loo geystay dad lagu soo uruririyay goobtaas, oo loo isticmaalo saldhig laga soo tahriibiyo dadka, kuna taalla 150Km Koofur-bari Tripoli.
Xeer Ilaaliye Marcello Tatangelo oo baaritaanka la wadaagay ku-xigeenkiisa, Ilda Boccassini, ayaa ku tilmaamay xeradaas mid la mid ah “Xabsiyadii Naasiga”, oo ay ku wareegsan yihiin darbiyo silig ah oo rag hubeysani ilaaliyaan.
Halkaas oo boqollaal dad ah lagu afduubay, laguna silciyay, si looga helo lacag madax-furasho ah, si loo saaro doomaha u socda Talyaaniga, iyada oo qofkiiba laga qaadayo $7,500 oo Dollar.
Dadka ayaa dhowr bilood lagu haysan jiray, wixii 1 sano dhaafa oo lacag bixin waayana waxaa lagu cadaabi jiray qolal gaar ah, marka dambana waa la khaarajin jiray.
Boccassini qudheeda oo soo xiganaysa sheekooyinka jirdilka ee dadkaas loo gaystay ayaa sheegtay in ay yihiin sheekooyin naxdin leh oo ayan weligeed maqal, 40kii sano ee shaqada ay ku jirtay.
Cismaan, 22 jir ka soo jeeda Muqdisho, waxaa la qabtay 26kii Septembar, maalin ka dib markii uu soo galay, sida qaxooti caadi ah, Xerda Via Sammartini, waxaana aqoonsaday qaar ka mid ahaa dadkii uu horey u soo fara xumeeyay oo ay ku jiraan 2 aan weli qaangaarin.
Gabdhahaas middood oo magaceeda lagu soo gaabiyay H.I.M, da’deeduna tahay 17 waxay noqotay qofkii u horreeyay oo aqoonsaday, markii ay aragtay, ninka dambiyadan foosha xun lagu tuhunsanyahay.
Ninkaas oo hadda ku xiran Xabsiga San Vittore ee Milano wuxuu ku eedeysanyahay dunuub ay ka mid yihiin dil, afduub iyo kufsi, dad markhaati ahna waxay xaqiijinayaan in uu dilay 4 qof, 10neeyo gabdhoodna kufsaday.
Baaritaannada Xeer-ilaalinta Talyaanigu waddo ayaa lagu ogaan doonaa sababaha ku khasbay in uu shaqadaas ka soo tago iyo waliba macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ururrada dambiyada u abaabulan ee ka dambeeya tahriibka badaha.
Suuriya: Raqqa oo gacanta u gashay Maleeshiyo Maraykanku taageero
Wasiirka Caafimaadka Turkiya oo gurmad ku tagay Muqdisho
Shiina oo u soo dhigatay dameerihii Afrika
Soomaaliya: Qarax lagu hoobtay oo galabta ka dhacay Muqdisho (Video)